Vaovao - Ny tsenantsika roa lehibe dia samy manana vaovao tsara amin'ny 2021
Ny tsenantsika roa lehibe dia samy manana vaovao tsara amin'ny 2021
Niakatra 15% ka hatramin'ny 38.0Mt ny varotra simenitra Pakistane tao anatin'ny valo volana voalohany tamin'ny taona 2021.
Ny mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Mpanamboatra Simenitra rehetra ao Pakistan (APCMA) dia nandrakitra ny varotra simenitra 38.0Mt tao anatin'ny valo volana nifarana tamin'ny 28 Febroary 2021 - ny valo volana voalohany tamin'ny taom-bola 2021 - niakatra 14% isan-taona avy amin'ny 33.3 Mt amin'ny vanim-potoana mifanaraka amin'ny taom-bola 2020. Ny gazety Dawn dia nitatitra fa ny fanondranana entana dia niakatra 7% ho 6.33Mt avy amin'ny 5.94Mt raha niakatra 16% ho 31.6Mt ny fandefasana any an-toerana raha 27.4Mt.
Nilaza ny fikambanana fa misedra olana amin'ny vidiny lafo ny mpamokatra noho ny fiakaran'ny vidin'ny saribao sy ny angovo.
China National Building Materials (CNBM) dia mikasa ny hampitombo ny tsatòkany ao amin'ny Tianshan Cement ho 88% avy amin'ny 46% ho ampahany amin'ny fanavaozana ny rafitra. Ny Tianshan Cement dia hahazo ny orinasa CNBM mpiara-miasa mivantana amin'ny China United Cement sy Sinoma Cement. Horaisin’ny CNBM ihany koa ny tsatòka maro an’isa ao amin’ny Southwest Cement sy South Cement. Nilaza ny vondrona fa efa nahavita ny fanaraha-maso, ny fanombanana ary ny fanombanana ny fanavaozana. Manaraka fanambarana amin'ny fahavaratra 2020 momba ny drafitra izany.
Tamin'ny fifampiraharahana mifandraika amin'izany, nilaza i Tianshan Cement fa nanaiky hividy ny 1,3% an'i Jiangxi Wannianqing Cement ao amin'ny South Cement. Notaterin'ny Reuters fa $96.0m ny sandan'ity fifanarahana ity.
Nilaza ny CNBM fa ny fanavaozana dia natao mba "hampiroborobo ny fampidirana ireo loharanon-karena avo lenta, hanamafisana ny toeran'ny orinasa eo amin'ny indostrian'ny simenitra ary hanamora ny famahana ny fifaninanana indostrialy eo amin'ireo sampan'ny orinasa eo amin'ny sehatry ny fandraharahana simenitra."
Hampitomboinay ny serivisy sy ny famatsiana kojakoja simenitra amin'ny tsena roa.
Fotoana fandefasana: May-26-2021
Grates, Fandrefesana: Fandoroana fantsona sy paompy, Sinter Feed Tunnels, Efijery mafana, Swing Chutes Liners, 8+4 Mitafy takelaka,